အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: August 2012
<!-- Facebook Like Badge START --><div style="width: 100%;"><div style="background: #3B5998;padding: 5px;"><img src="http://www.facebook.com/images/fb_logo_small.png" alt="Facebook"/><img src="https://badge.facebook.com/badge/103865773008399.100002414284038.917321001.png" alt="" width="0" height="0"/></div><div style="background: #EDEFF4;display: block;border-right: 1px solid #D8DFEA;border-bottom: 1px solid #D8DFEA;border-left: 1px solid #D8DFEA;margin: 0px;padding: 0px 0px 5px 0px;"><div style="background: #EDEFF4;display: block;padding: 5px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td valign="top"><img src="http://www.facebook.com/images/icons/fbpage.gif" alt=""/></td><td valign="top"><p style="color: #808080;font-family: verdana;font-size: 11px;margin: 0px 0px 0px 0px;padding: 0px 8px 0px 8px;"><a href="https://www.facebook.com/aung.hein.319" target="_TOP" style="color: #3B5998;font-family: verdana;font-size: 11px;font-weight: normal;margin: 0px;padding: 0px 0px 0px 0px;text-decoration: none;" title="Aung Hein">Aung Hein</a> likes</p></td></tr></table></div><div style="background: #FFFFFF;clear: both;display: block;margin: 0px;overflow: hidden;padding: 5px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td valign="middle"><a href="https://www.facebook.com/7daynews" target="_TOP" style="border: 0px;color: #3B5998;font-family: verdana;font-size: 12px;font-weight: bold;margin: 0px;padding: 0px;text-decoration: none;" title="7Day News Journal"><img src="https://www.facebook.com/profile/pic.php?oid=AWyIsUkCQiAIvor0w22b_XaEER4SticB6blZ0jPuUv11zm-TCo78f22uOC62rOT7ah8&size=square" style="border: 0px;margin: 0px;padding: 0px;" alt="7Day News Journal"/></a></td><td valign="middle" style="padding: 0px 8px 0px 8px;"><a href="https://www.facebook.com/7daynews" target="_TOP" style="border: 0px;color: #3B5998;font-family: verdana;font-size: 12px;font-weight: bold;margin: 0px;padding: 0px;text-decoration: none;" title="7Day News Journal">7Day News Journal</a></td></tr></table></div></div><div style="display: block;float: right;margin: 0px;padding: 4px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.facebook.com/badges/like.php" target="_TOP" style="color: #3B5998;font-family: verdana;font-size: 11px;font-weight: none;margin: 0px;padding: 0px;text-decoration: none;" title="Create your Like Badge">Create your Like Badge</a></div></div><!-- Facebook Like Badge END -->
Posted by Wai Lin Aung at 1:55 AM
Posted by Wai Lin Aung at 1:53 AM
<!-- Facebook Like Badge START --><div style="width: 100%;"><div style="background: #3B5998;padding: 5px;"><img src="http://www.facebook.com/images/fb_logo_small.png" alt="Facebook"/><img src="https://badge.facebook.com/badge/116785225047677.100002414284038.834675001.png" alt="" width="0" height="0"/></div><div style="background: #EDEFF4;display: block;border-right: 1px solid #D8DFEA;border-bottom: 1px solid #D8DFEA;border-left: 1px solid #D8DFEA;margin: 0px;padding: 0px 0px 5px 0px;"><div style="background: #EDEFF4;display: block;padding: 5px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td valign="top"><img src="http://www.facebook.com/images/icons/fbpage.gif" alt=""/></td><td valign="top"><p style="color: #808080;font-family: verdana;font-size: 11px;margin: 0px 0px 0px 0px;padding: 0px 8px 0px 8px;"><a href="https://www.facebook.com/aung.hein.319" target="_TOP" style="color: #3B5998;font-family: verdana;font-size: 11px;font-weight: normal;margin: 0px;padding: 0px 0px 0px 0px;text-decoration: none;" title="Aung Hein">Aung Hein</a> likes</p></td></tr></table></div><div style="background: #FFFFFF;clear: both;display: block;margin: 0px;overflow: hidden;padding: 5px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td valign="middle"><a href="https://www.facebook.com/pages/APK-Fan-Page/116785225047677" target="_TOP" style="border: 0px;color: #3B5998;font-family: verdana;font-size: 12px;font-weight: bold;margin: 0px;padding: 0px;text-decoration: none;" title="APK Fan Page"><img src="https://www.facebook.com/profile/pic.php?oid=AWxjvmrH-A2UvmUjRwxlQT1zsOrXl6Kc7ZTeLHHaz5wscf_l08hxHp7EYOSvQ8pgao0&size=square" style="border: 0px;margin: 0px;padding: 0px;" alt="APK Fan Page"/></a></td><td valign="middle" style="padding: 0px 8px 0px 8px;"><a href="https://www.facebook.com/pages/APK-Fan-Page/116785225047677" target="_TOP" style="border: 0px;color: #3B5998;font-family: verdana;font-size: 12px;font-weight: bold;margin: 0px;padding: 0px;text-decoration: none;" title="APK Fan Page">APK Fan Page</a></td></tr></table></div></div><div style="display: block;float: right;margin: 0px;padding: 4px 0px 0px 0px;"><a href="http://www.facebook.com/badges/like.php" target="_TOP" style="color: #3B5998;font-family: verdana;font-size: 11px;font-weight: none;margin: 0px;padding: 0px;text-decoration: none;" title="Create your Like Badge">Create your Like Badge</a></div></div><!-- Facebook Like Badge END -->
Posted by Wai Lin Aung at 1:52 AM
ကျောင်းကုန်းမြို့ နယ် ရေကြီးမှု မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
Posted by Wai Lin Aung at 1:33 AM
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားတွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦး မီးရှို့သေဆုံး
Posted by Wai Lin Aung at 1:00 AM
ကော်မတီများမှအထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားသည်အဖွဲ့အစည်းများမှာ INGO (၅)ဖွဲ့၊ NGO (၈)ဖွဲ့၊ သမ၀ါယမ( ၄၁ ) ဖွဲ့ ကုမဏီ (၂၃ )ဖွဲ့ စုစုပေါင်း (၇၇)ဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
အခြေခံလူတန်းစားများ၏လူမူစီးပွားဘ၀ ဖွံဖြွိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲ မူလျော့ချရေး အတွက် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသော အဖွဲ့ အစည်းများသည် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မူကောက်မတီ နေပြည်တော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ကောင်စီ ၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီတို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
နေပြည်တော် ဖုန်း ၀၆၇၄၁၀၀၄၈၊ ၀၆၇၄၁၉၁၉၀၊ ၆၇၄၁၀၂၅၄
၁၀ ရက်၈ လ ၂၀၁၂ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြပါ ကြေငြာချက်ကို ပြည်သူလူထုအကျိူးစီးပွား အလို့ငှာ ထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
”လက်တို့ပြီးတော့ ပြောရအုံးမယ်။ ပြောလိုက်တော့ ပြောလိုက်တော့ဗျို့”
ကြော်ငြာဝင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ တယ်လီဗီးရှင်းကြည့် ပရိတ်သတ် စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြည့်ရူလေ့ရှိသည် ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် ပြလျှင် ဖြစ်နေကြ ထုံးစံအတိုင်း လူမုန်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သည်းခံတော် မူကြပါ ကြပါကုန်။
အမှန်ဆိုရသော် ရေးရမည့်စာက တစ်မျက်နှာပင်မပြည့်။ ချဲ့ကားရေးနေသည်ဟု အမြင်ကတ် မျက်မုန်းကျိုး မုန်းမာန်ပွားသော် ခံရမည်သာဖြစ်ပေသတည်း။ ထိုသို့ မဟုတ်ပါဟု ငြင်းဆိုရန်လည်း မသင့်ချေ။ ဖတ်ကောင်း ရန်အလို့ငှာ ချဲ့ကားရေးနေခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည် ဟူလို။
နိုင်ငံတော် က အမှန်တစ်ကယ် ဖော်ဆောင်နေသည်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးမူ လျောချရေး သို့မဟုတ် ပပျောက်ရေး ။ ပပျောက်အောင်မလုပ်နိုင်စေကာမူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမူကို တဖြည်းဖြည်း လျောချရန်အတွက် အထက်ပါ စီမံချက်များကို ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
”သို့သော်” ထိုသို့သော်ကား ရင်လေးစရာ မသတီစရာ၊ စိတ်ညစ်စရာ ”သို့သော်” သာ ဖြစ်ပါသည်ခလို။
အကြောင်းစုံကို ဆက်လက်ရူစားပါလေလော့ စာပေချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးခင်ဗျာ။
နိုင်ငံတော် အခြေခံဥပဒေ အခန်း(ဂ) စာမျက်နှာ(၁၅၀) ပုဒ်မ ၃၅၄ ပိုဒ်ခွဲ (ဂ) ” နိုင်ငံသား၊နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ” ဆိုသော အခန်းတွင် ”လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည် ဟုဖော်ပြပါရှိပါသည်။
သန်စွမ်းခိုင်မာသော Institution များတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် institutionalization သင်းဖွဲ့ပြုခြင်း ဖြစ်ပြီးး နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်လည်း ဖြစ်သည်ဟု ဖရန့်စစ်ဖူကူယားမား (မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာမီကာလအတွင်း အလည်အပတ်ရောက်မည်ဟု သတင်းများတွင် ထည်သွင်းဖော်ပြခြင်းခံ ရသူ ) က ရေးသားခဲ့ပါသည်။
ခိုင်မာအားကောင်းလျှက်ပြည်သူ့အကျိူးကိုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင်မားသော အသင်းအဖွဲ့များ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းရန် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော် သမတကြီးကလည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမူလျော့ကျအောင် ငွေစုငွေချေး အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုအလျင်းသင့်သည့်အခါတိုင်းမြွတ်ကြားခဲ့သည်ကို သတင်းစားများ တွင်ဖတ်ရှုသိရှိရပါသည်။
အခြေခံဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ရုံမျှသာမကနိုင်ငံတစ်ကာပညာရှင်များ၏ အဆိုအမိန့်နှင့်လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ပေထသော အဆိုပါငွေစုငွေချေးအသင်းကြီးကို လူဦးရေ ၅၀ ကျော် ငွေကျပ် သိန်းကိုးဆယ်ကျော် နှင့် တည်ထောင်ပြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်သောအခါ တွေ့ကြုံ ရသော အခက်အခဲများစွာတို့သည် နိင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးတည်းဟူသည့် အမျိုးသားရေးတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်လိုစိတ်ပင်မရှိတော့ပဲ တည်ဆောက်ဖွဲစည်းပြီးသားအဖွဲ့ကိုပင်အစိတ်စိတ်အမွှားမွှားကွဲအောင်ဖျက်စီးလိုစိတ်များတဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာပေတော့သည် တမုံ။ (စိတ်ထဲ ရှိတာ ရေးတာပါ တကယ်မလုပ်ရဲ)
နိုင်ငံတော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အသေးစား ငွေစုငွေချေး လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေကို နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။
အကြောင်းအကြောင်းကို အကြောင်းအကြောင်းပြုပြီးသကာလ . . . . . . . .
သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ အမူဆောင်အဖွဲ့၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် ငွေစာရင်း နှင့် နောက်ဆုံး ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို ဖော်ပြသည့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း ၊အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အချို့ ကို ကိုင်ဆောင်လျှက် အဖွဲ့ဝင် အချို့နှင့်အတူ ၃၆ လမ်း အထက်ဘလောက် ရှိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်မူကော်မတီ သို့ လိုင်စင်မှတ်ပုံတင်ခွင်ရရှိရေး တို့အရေး ဟူသော အသံတိတ်ကြွေးကြော်ချက်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်ကာ သံမဏီစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ချီတက် ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်က တနည်း ။
အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကော်မတီက ရောင်းချပေးသည့် နည်းဥပဒေစာအုပ်၊ ထားရှိသင့်သည့် စာရင်ပုံစံ၊ အသင်းသားများလက်စွဲ စသည်တို့ ကိုလည်း ဖတ်ရှုရန် ၀ယ်ယူအားပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရသည်က တစ်သွုယ်။
အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်မူ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကသော ဗိုလ်မှူးကိုကိုမောင်၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးဝင်အောင်တို့က လွန်စွာရှားပါး အဖိုးထိုက်တန်လှသော ၄င်းတို့၏ အချိန်များကို အသုံးပြုလျှက် အဖွဲ့ဝင်များကိုတွေ့ဆုံပေးကာ ဆောင်ရွက်သင့်သည့် နည်းလမ်း စည်းကမ်းတို့ ကို ညွှန်ကြားပေးသည်က တစ်ဖုံ။
နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်လေပြီ။ အသင်းအဖွဲ့ တည်ရှိရာ မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးရုံးမှ ထောက်ခံချက်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်လည်းဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ်ယူလျှင် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမူ ကော်မရှင် ရုံးသို့သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ် မယူမည့် အဖွဲ့အတွက် အထွေထွေ အုပ်ချူပ်ရေး ၏လက်မှတ် မဖြစ်မနေ ပါရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အထက်အဖွဲ့အဆင့်ဆင့်က က ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
”သို့သော်” ---- လာပြန်ချေပြီ ”သို့သော်”။ စာတစ်ကြောင်း ”၄င်းကောင်း” ဆယ်ခါပါဟု ဆိုရိုးရှိသော်လည်း ”သို့သော်” ဆယ်ခါ ဟု မရှိပေသောကြောင့် ဆက်ရေးပါဦးမည်။
အသင်းအဖွဲ့တည်ရှိသည့် တည်နေရာ၏ ဒေသအာဏာပိုင်နေထိုင်သည့် ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်း ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ရှိ မြိုနယ်အထွေထွေ အုပ်ချူပ်မှူးရုံး ၀င်စာဌာနသို့ သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ကို သွားရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ အထက်အဆင့်ဆင့်မှ အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ညွှန်ကြားချက်မရှိသဖြင့် ၀င်စာနံပါတ်မပေးဟုသိရသည်။အံဖွယ်သုတပါတကား။ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဝေစွ။ ၀င်စာကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းပင် မရှိပေထသော စွမ်းဆောင်ရည်ထက်မြက်သည့် အဖွဲ့အစည်း။
သတင်းစာဖတ်ဟန်မတူ။နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းဆိုသည်ကိုမသိ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို နားမလည်။အထက်ညွှန်ကြားချက် မရှိလျှင် ဘာကိုမျှ မလုပ်တတ်။ ၄င်းတို့၏အထက်ဆိုသူများကလည်း ပြန်တမ်းများ၊ အခြေခံဥပဒေများ၊ သတင်းစာများနှင့် နိုင်ငံတော်သမတကြီး၏ မိန့်ခွန်းများကို မဖတ်ကြ ဆိုလျှင် နိုင်ငံတော်ကို မည်သို့တည်ဆောက်ကြမည်နည်း။ အထက်က ပြောင်းလေပြီ ။ အောက်က မပြောင်းသေး။ သို့တည်းမဟုတ် အထက်အဆင့်ဆင့်က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ကြီးဆီသို့ ချီတက်နိုင်ရန် ပြောင်လည်း အောင်ကြိုးစားကြလေပြီ ။
အောက်ခြေ အဆင့်ဆင့် အဖွဲအစည်းများက ”ရလျှင် လုပ်ပေးပါသည်” ”မရလျှင် ဘာမျှ မလုပ်ပေးနိုင်ပါ” ဟု ဘာမျှ မရလျှင် ဘာကိုမျှ စွမ်းဆောင်ရည်မရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်း။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ”ဘာမသိ ညာမသိ ၊ဘူမသိ ကိုးမသိ ”လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စုသမတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် ---------- --
သို့ဆိုလျှင်ကား တင်ပြခဲ့ပြီးသော် စိတ်ညစ်စရာ ၊မသတီစရာ ၊ရင်လေးစရာ ”သို့သော်” မှာ လုံလောက်ချေပြီ ဖြစ်သတည်း။
အမှတ်(၁၄၉၄) ပြည်ထောင်စုလမ်း ၂၄ ရပ်ကွက်
ဒဂုံမြို့သစ် မြို့နယ် တောင်ပိုင်း
Posted by Wai Lin Aung at 7:55 AM
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါက်တာဦးခင်ရွှေသည် (Crony)ဟူသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်အမှန်ကို လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်းပြောဆိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးသည် Crony ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်မှုလွဲမှား စွာ သုံးစွဲနေကြသည့်အတွက် ဒေါက်တာဦးခင်ရွှေက လွှတ်တော်တွင် ယခုကဲ့သို့ ရှင်းလင်းတင်ပြ ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ခရိုနီ(Crony )ဆိုသည်မှာ အပေါင်းအသင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားများ ကို ကာကွယ်ထိမ်းသိမ်းစောက်ရှောက်နေသော နိုင်ငံတော်နှင့် တသားတည်းရှိသည့် နိုင်ငံတော် ၏ အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဦးခင်ရွှေ၏ လွှတ်တော်အတွင်း တင်ပြဆွေးနွေးချက် ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ (၂)ရက်နေ့ထုတ် Hot News Journal တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
နားလည်မူလွှဲမှားနေသည့် ပြည်သူလူထုအမှားကို ထောက်ပြပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိသော အမှန် တရားကို ချစ်မြတ်နိုးသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး လွှတ်တော်အတွင်းတွင် ရှိနေသည့် အတွက်လည်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ကိုယ်စား ဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်ရပါသည်။
ပြည်သူ့အကျိုးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အပြင် နိုင်ငံတော်နှင့် တသားတည်းရှိ၍ နိုင်ငံအကျိုးကိုသာ ဦးလည်မသုန် ထမ်းရွက်နေသည့် နိုင်ငံတော်၏ အပေါင်းအသင်းကောင်း ခရိုနီတစ်ဦး ဖြစ်နေသောကြောင့် ဦးခင်ရွှေသည် ပြည်သူ လူထုထက် အသိပညာဉဏ် အလိမ္မာ ပိုမိုထက်မြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားစွာ ယုံကြည် မိပါသည်။
အဆိုပါ ခရိုနီ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အပျက်သဘောဆောင်သော အသုံးအနှုံးအဖြစ် အသုံးပြု မည့်အစား အပြုသဘောဆောင်သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သော နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားကို စောင့် ရှောက်သည့် နိုင်ငံတော်နှင့် တသားတည်းရှိသော အပေါင်းအသင်းအဖြစ် ဒေါက်တာ ဦးခင်ရွှေ လွှတ်တော်တွင် တင်ပြသည့် အဓိပ်္ပါယ်အတိုင်း သုံးစွဲကြပါရန် ဂျာနယ်လစ်များ၊ စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ( ဦးခင်ရွှေခင်ဗျာ ကျနော်ကို သင့်တော်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုခု construction ဖြစ်ဖြစ် Tourism ဖြစ်ဖြစ် ချထားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးလျှင် မသင့်တော်ပါလားခင်ဗျာ)
၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ၊ စာမျက်နှာ (၁၂) ၊အခန်း(၁) ၊ပုဒ်မ (၄၇)တွင် ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပြုမူအခွင့်အာဏာကိုသော်လည်းကောင်း အုပ်ချုပ်မူအခွင့် အာဏာကိုသော်လည်းကောင်း ကျင့်သုံးနေသော် အဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုလိုသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
ဂျာနယ်လစ်များ စာနယ်ဇင်း သမားများနှင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးသည် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်သော နိုင်ငံတော်နှင့် တသားတည်း ရှိသည့် ခရိုနီများကို ပြစ်တင် စော်ကား၊ ရှုတ်ချ၊ အသရေဖျက်၊ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းအောင် မပြုလုပ်ကြရန်၊ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပါ လျှင် နိုင်ငံတော်ကို ပြစ်တင်၊ စော်ကား၊ ရှုတ်ချ၊ အသရေဖျက်၊ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းအောင် ပြု မူခြင်း ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ် ခံရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပြောဆို ပြုမူကြရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါသည်။
ပြည်သူလူထုနှင့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ လေ့လာနိုင်ရန် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသော Oxford Advenced Learner’s Dictionnary မှ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုချက် ကို တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Crony/noun (often disapproving )aperson that spendsalot of time with : He is playing card with his cornies. cronysim/noun (disapproving) the situation in which people in power give jobs in their friends. disapproving / to think that sth/sb is not good or suitable Oxford Advanced Learner’s Dictionary တွင်ဖွင့်ဆိုထားသော Crony ၏အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာခင်ရွှေ လွှတ်တော်တွင်တင်ပြသောအဓိပ္ပါယ်နှင့်လျော်ညီစွာပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါရန် အောက်စဖိုဒ့် တက္ကသိုလ် နှင့် အဘိဓါန်ပြုစုရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြပါသည်။ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသော စာအုပ်များတွင် ပြင်ဆင်ရန် ခက်ခဲပါက နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမည်ဖြစ်သော Latest Edition တွင် ပြင်ဆင်ပေးပါရန် ထပ်လောင်းတင်ပြပါသည်။အကယ်၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးသော software များရှိခဲ့လျှင် လည်းအဆိုပါ software ပညာရှင် အနေဖြင့် ခရိုနီ၏ အဓိပ္ပာယ်မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို “နိုင်ငံတော်၏အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံတော် နှင့် တသားတည်းရှိသောနိုင်ငံတော်၏ အပေါင်းအသင်း´´ဟုပြင်ဆင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ခရိုနီများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေများ ပြဌာန်းနိုင်ရန် နှင့် ခရိုနီများပါဝင်သည့် အသင်းအဖွဲ့များတည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေပြုနိုင်ရန် အလို့ဌာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးမှ အဆိုတင်သွင်းခြင်း ၊ အတည်ပြုပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါရန်တင်ပြပါသည်။Institution များခိုင်မာသန်စွမ်းအောင် တည်ထောင်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး(State Building) ပင်မဟုတ်ပါလော။ ထို့ကြောင့် Crony Institution မျာတောင့်တင်း ခိုင်မာသန်စွမ်းအားကောင်းလျှင်ကား ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးသည် လည်း……...........................….ဖြစ်ပါတော့သည်။ ကိုဧည့်သည်
ဒေါက်တာ ဦးခင်ရွှေသည် ကျွန်ုထံ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမျှ ချထားလုပ်ကိုင်စေခြင်းမရှိသေးပါ ။ ဦးခင်ရွှေထံမှ လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာကိုချထားပေးခြင်းရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် ဒေါက်တာ ဦးခင်ရွှေ နှင့်တကွ ခရိုနီများအားလုံးကို တိုက်ခိုက် ရှုတ်ချ အသရေဖျက်နေသော ဦးနေမျိုးဝေ(မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ) နှင့်တကွ တိုက်ခိုက်၊ပြစ်တင် ဝေဖန် အသရေဖျက်နေသော မည်သူ့ ကိုမဆို နိုင်ငံတော် ကို ဝေဖန် ရှုတ်ချ အသရေဖျက် သည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ဖြင်ကျွန်ုပ် မှ တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်ပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်မှ လွှတ်တော်အမတ်များငိုက် မနေကြရန်သတိပေး
Posted by Wai Lin Aung at 7:41 AM
ကန့် ကွက်မဲ 271
အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မူကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွင်း မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်စေရာ မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ ၃၇၉ မဲအနက် ထောက်ခံမဲ ၆၈ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၂၇၁ မဲ ကြားနေမဲ ၁၅မဲ ဖြစ်ကြောင့်း ဖတ်မှတ်သိရှိခဲ့ ရပါသည်။ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စံနစ်ခောတ်က အုပ်ချူပ်မူ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဟောင်း မဟုတ်ပဲ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ၊ သန့်ရှင်းသော အုပ်ချူပ်ရေး ပုံစံအသစ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အတွင်း မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ကြသည်မှာ ကျေနပ်အားရရှိလှပါသည်။ မိမိ၏ သဘောဆနကို လွှတ်တော်အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ပြင်ပတွင်ဖြစ်စေ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းအား လူသားတိုင်း၏မွေးရာပါ အခွင်အရေးဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ လူအခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းတွင် အတိအလင်းပြဆိုထားပါသည်။ အုပ်ချူပ်ရေးအာဏာကို ရရှိထားသည့် အစိုးရအဖွဲသည် နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်၊ တိုးတက်ဖွံဖြိုးအောင်၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မားအောင် နေးမအား ညမနား ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့သည် မပြောပလောက်သော အားနည်းချက် များလည်းရှိနေနိုင်သည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အားနည်းချက် အနည်းငယ်မျှလောက်ကို အပြစ်ရှာ အနာလုပ် ကာ အသရေဖျက်တတ်သော မီဒီယာ အချို့ လည်းရှိနေသည်မှာ အပြစ်မဆိုသာပေ။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးသိန်းညွန့် သည် အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မူကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာသင့်သည့် အဆိုကို အဂတိလိုက်စားမှု တားမြစ်ရေး ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းရန် လွှတ်တော်အတွင်း တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ နိုင်ငံအ၀ှန်း မှ ပြည်သူတို့၏ ဆနဖြင့် ရွှေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စား လှယ် ၂၇၁ ဦး၏ ကန့် ကွက်မဲဖြင့် အစိုးအဖွဲဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မူကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာရမည့်အဆိုကို ပယ်ဖျက်လိုက်နိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ သန့် ရှင်းသော အုပ်ချူပ်ရေးကို ဖော်ဆောင်နေသော သမတ ကြီးနှင့် တကွ အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်အားလုံးတို့ သည် ယခင်စစ် အစိုးရလက်ထက်များတွင် စိတ်ကူးဖြင့်ပင် အကောင်အထည် မဖော်ဆောင်နိုင်သော ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတစွာ အကောင်အထည်ဖော်ပေးပြီး ဥပဒေပြု အာဏာကို ရရှိထားသည် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စာလှယ်တို့ သည် ပြည်သှူု့ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဆောင်းပါးအစတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော သတင်း ကို ဖတ် ရှု ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်လောက်ပေပြီ။ ထိုကြောင့် နိုင်ငံတော်၏အနာဂါတ်မှာ အားရ ကျေနပ်ဖွယ်ပါတကားဟု ပိတိသောမနသ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ နိုင်ငဲံတော်ကို တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ စာရိတ ဖြင့်သာ တည်ဆောက်ရသည်ဟုဖတ်မှတ် သိရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ အကျင့်စာရိတ ကောင်းမွန်သော သန့်ှ ရှင်းသော အစိုးရအဖွဲ့ ၀င် များ၏ ပိုင်ဆိုင်မူကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာရန် အမှန်မှာ မလိုအပ်ပါ ချေ၊ အကျင့်ပျက် ခြစား အဂတိလိုက်စား မတရားလုပ်သူကိုသာ တရားစွဲဆိုသင့်သည်မဟုတ်ပါလား၊ အသိပညာမြင့်မား သန့်ရှင်းသော အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ဥပဒေပြုသင့်သည်မဟုတ်ပါလော။ ဥပဒေပြုအာဏာကို အသုံးပြုလျှက် နိုင်ငံတော်ကို တည့်မတ်ထိန်းကြောင်းနေရသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် ပြည်သူလူထုမှ ပေါက်ဖွားလားသည့် သန့်ရှင်းသော အစိုရအဖွဲ့ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လည်းကောင်း၊ မလိုအပ်ပါပဲ ဥပဒေများ ဖောင်းပွ လာမည်ကို စိုးရိမ်လျှက် ခိုင်မာကျစ်လစ်သော အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်လိုသည့် အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရိုးသားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များ၏ဂုဏ်သိကာ ကျဆင်းမည်ကို ကာကွယ်တားဆီး ခြင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်များသည် အုပ်ချူပ်ရေးအာဏာ ကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတော်ကို ထိန်းကျောင်းနေသော အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များနှင့် တစ်စိတ်တည်း တ၀မ်းတည်း တသားတည်း ညီညွတ်စွာ ရှိနေသည်ဟု ပြသလိုခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာရန် အဆိုတင်သွင်းခြင်းကို ကန့် ကွက်မဲ 271 မဲ ဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ကာကွယ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဧည့်သည်
ဦးတေဇကလယ်မြေ ဧကလေးသောင်းနိုင်ငံတော် သို့ ပြန်အပ်
သာဓုပါဗျာ သာဓုပါဗျို့ ။ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ခရိုနီများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မူ ဟု ဆိုရပေမည်။ အကြောင်းကြောင်းကို အကြောင်းပြု ပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးပြုလာသည်ဆိုလျှင်ကား ပြည့်သူ့ အတွက် ခရိုနီ ပါ တကားဟုသာ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ပြည်သူ့ အကျိုးကို စောင့်ရှောက်နိုင်သော ပါတီ ၊အစိုးရ အဖွဲ့ နှင် လူသား တစ်ဦး ဦးသည် အမြဲတမ်း ပြည်သူရင်တွင် ထာဝရ ရှင်သန်ခွင့် ရရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 6:08 AM
Hello Hot News နားတစ်ရာဖော်ကောင်လုပ်သည် ဖော်လိုသူများဆက်သွယ်ကြပါ
Posted by Wai Lin Aung at 5:50 AM
Posted by Wai Lin Aung at 5:49 AM
Posted by Wai Lin Aung at 12:55 AM
ဒီမိုဝေယံ: ဝိတ်ပြားရှင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ငြင်းချက်ထုတ်နေချိန...
ဒီမိုဝေယံ: ဝိတ်ပြားရှင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ငြင်းချက်ထုတ်နေချိန...: 缅甸有人对总统说不 缅甸前仰光市市长、现执政党“巩发党”中央执行委员、国会议员、国会“改革及现代化监督委员会”主席昂丁林接受《南方周末》采访，语出惊人，是个人物！ ညောင်မြစ်တူးတော့ ဖွတ်ဥပေါ်ဆိုသလို တရုတ်ဆိုဒ်တွေမှာတော့...
ဘာအခုမှ ကြောက်ပါဘီလဲ ထွက်ပြီးဆင် စွယ် ပြန်ဝင်ဆိုတာ ထုံးစံရှိလို့လား ပါပီးတဲ့အီအီးကို ပြန်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင် မျိုချလိုက်တော ရှောင်တိန်းပြင်းတဲ့ အောင်သိန်လင်း
Posted by Wai Lin Aung at 3:05 AM
ညခင်းရဲ့လမင်း: မွေးနေ့ အဆုံးအမ ဓမ္မဒေသနာအမြတ်ရတနာ။
ညခင်းရဲ့လမင်း: မွေးနေ့ အဆုံးအမ ဓမ္မဒေသနာအမြတ်ရတနာ။: မွေးနေ့ အတွက် ချီးမြှင့်သော ဓမ္မဒေသနာအမြတ်ရတနာ။ အဆုံးအမပေးသော ဆရာတော်အားကျေးဇူးတင် ဦးချကန်တော့ရင်း အဆုံးအမများကိုပြန်လည်း မျှဝေပါတယ်။ မွေ...
Posted by Wai Lin Aung at 2:34 AM
ကျောင်းကုန်းမြို့ နယ် ရေကြီးမှု မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)...
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားတွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦး မီးရှို့သေဆ...
မြန်မာ့ခရိုနီ အဓိပ္ပါယ် အားဆောင်းပါရှင် ကိုဧည့်သည် ...
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်မှ လွှတ်တော်အ...
Hello Hot News နားတစ်ရာဖော်ကောင်လုပ်သည် ဖော်လိုသူမ...
ဒီမိုဝေယံ: ဝိတ်ပြားရှင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ငြင်းချက...
ညခင်းရဲ့လမင်း: မွေးနေ့ အဆုံးအမ ဓမ္မဒေသနာအမြတ်ရတနာ။...